Puntland oo ka hadashay hadal la qoonsaday oo madaxweyne Gaas ka Sheegay gobolka Sanaag. – The Voice of Northeastern Kenya
Puntland oo ka hadashay hadal la qoonsaday oo madaxweyne Gaas ka Sheegay gobolka Sanaag.
War kasoo baxay Madaxtooyadda maamul goboleedka Puntland ayaa raaligelin looga bixiyay hadalkii dhawaan Madaxweyne Gaas uu ka sheegay Magaalada Badhan ee gobolka Sanaag,kaasoo la sheegay inay dhibsadeen dadka kunool degaanada maamulka Koonfur Galbeed.
Warka kasoo baxay Madaxtooyadda maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in Puntland ay si buuxda uga raali gelinayso maamulka iyo Shacabka Koonfur Galbeed Ereyadii ay dhibsadeen ee ku jiray khudbadii Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ee uu uga hadlayey Arimo ku saabsan Al-Shabaab gaar ahaan deegaanadii uuu markaas carabaabay.
Baraha ay bulshada ku wada xiriirto ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa si weyn looga hadal hayay dhaliilo ka dhashay hadal uu jeediyay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland, Cabdiweli Cali Gaas xiligaas oo uu sheegay in deegaano ka tirsan koonfur Galbeed Soomaaliya dad ka yimid ay amaanka carqaladaynayaan.
← DHAGEYSO Kalfadhigii baarlamaanka Soomaaliya oo maanta baaqday.
World Bank approves $80 million grant to help Somalia →